क्षेत्री बाहुन नै हुन त द,’लितको दुश्मन ? – Complete Nepali News Portal
क्षेत्री बाहुन नै हुन त द,’लितको दुश्मन ?
नबिन बिक, चीन ,गोन्जाउ
रुकुम चौरजहारीको सामुहिक हत्याले मानब इतिहासमा कलंकको एउटा कालो गाढा र ठुलो धब्बा लगाईदिएको छ । ती हत्याराहरुले क्रुरताका सबै पराकाष्ठा पार गरेका छन । जस्तो सुकै गल्ती भएनी मान्छे मार्ने प्रबृती राम्रो होईन, मान्छे मारेर पनि कार्वाही भएन भने भोली यस्ले बिकराल रुप लिनेछ । यो प्रबृतिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ नत्र भोली तपाई हामी जो कोही पनि यस्तै घटनाको शिकार हुनुपर्छ। त्यसैले हत्या र हिंसा कुनै पनि कोणबाट सहि हुन सक्दैन, दोषीलाई कार्वाही हुनै पर्छ।
अर्की भान्जी पनि आरएन नर्स हुन तर उनी अष्ट्रेलियाकी, एक जना नेवार केटाले औधी मन पराउने ,राम्री पनि उस्तै, भान्जीले उसको माया साँचों हो की हैन थाहा पाउन सकिनन । किनकी प्राय बिश्वकर्मा,परियार, मिजार हरुका चेलीलाई लव गरे पनि सजिलै बिहे गरेर भित्र्याईदैन । त्यसैले मलाई घर बाटै माग्न आउने भए मात्रै तिमी संग माया प्रेम गर्छु । बिहे गर्छु नत्र मेरो नजिक नआउ भनेसी, नेवार केटो बाउ आमा मनाएर पञ्चेबाजा बजाएर जन्ति लिएरै आएर बेहुलि लिएर गए । आज उनीहरु अष्ट्रेलियामा सुखी जिबन बिताई रहेका छन।दुबै घटना चितवनको हो, आफु शिक्षित र सक्षम भएमा कसैले जात हेर्दैन भन्ने यो एउटा राम्रो उदारहण हो ।
नेवार केटो बाउ आमा मनाएर पञ्चेबाजा बजाएर जन्ति लिएरै आएर बेहुलि लिएर गए
(लेखक चीनबाट एनआरएनएको केन्द्रीय सदस्य तथा भ्रष्टचार बिरुद्दको सामाजिक अभियन्ता पनि हुन) – इनेपलिज